Loverboy Mkpọrọ Espresso Martini Review - Nri
Enyi Na Ezi Na Ụlọ Akwụkwọ International Jụọ Ọkachamara Ejiji Agbamakwụkwọ Ndị Nweta Nddị Onye India Ahụike Nke Nrụgide
Loverboy Just Amalitere Otu n’ime Espresso Martinis nke Canned First — Nke a bụ etu o si atọ
Ihe ọ booụ booụ boozy dị na mkpọ abụghị ihe ọhụrụ. Beer bụ O.G., mana enwere a nke gi nke ihe ọ toụ drinksụ ịhọrọ n'oge, ma ị na-ahọrọ ị ga-ahọrọ ike seltzer , mmanya ma ọ bụ mmụọ. Otu mmanya ị * agaghị * ahụkarị na mkpọ? Espresso martinis, nke a na-emekarị site na ngwakọta vodka, espresso, mmanya kọfị na sirop dị mfe. N'ụzọ dị mwute, nke ahụ na-agbanwe ịgbanwe, ekele Nwa nwoke Ọkpụkpọ mkpọ ọhụrụ nke Espresso Martini Kissed na Vanilla. Anyị ga-agbape otu mepee tupu ya amalite, yabụ gụọ maka nyocha anyị n'eziokwu.
Njikọ: Otu esi emebi Martini unyi
Arụ ọrụ: 20/20
Loverboy amaola ama maka ya ike tii na na-akọ , nke a na-eme na-enweghị agbakwunye sugar na elekere na ihe dị ka calorie 100 ma ọ bụ obere kwa ike. Mma, ha na-abịa na mkpụrụ, na-akpali akpali flavors dị ka Hibiscus Pom , Mkpụrụ osisi Blueberry na Passionfruit Guava . The Espresso Martini Kissed na Vanilla na-agbaso uwe, dịka ọ na-enweghị mmiri ara ehi, na-enweghị gluten ma nwee shuga agbakwunye agbakwunye.
Ọ dị mkpa na onye nchoputa Kyle Cooke (ị nwere ike ịmata ya site na usoro eziokwu Bravo Lọ Ezumike ) iji mee ka ahụ dị mma na mmanya mmanya. Anyị chọrọ ịmepụta nke kachasị mma maka nke ọzọ maka ịme mmanya ọkaibe n'ụlọ, ka Cooke na-ekwu. Mgbe anyị mere nnyocha miri emi banyere nkezi espresso martini, anyị mụtara na [a] nke a na-ahụkarị nwere ike ịnwe calorie 200 ruo 300 kwa mmanya mmanya na gram 25 nke shuga, na ụdị nke mkpọ ahụ nwere ndepụta ịsa akwa nke ihe ndị ị nwere ike ịnụtụbeghị. nke dị tupu.
O were ọnwa nyocha nke uto (na ihe iri abụọ na isii) iji kụọ mmanya ahụ, nke pụtara na nke mbụ. Emere ya na ihe dika mmanu MCT, nke amara n’ire abụba ma na ebucha ihe n’eme ka metabolism, mmiri maple maka ịtọ ụtọ na espresso kọfị maka ụtọ (na naanị cafiline lil). Ihe ndị a na-eme ka Loverboy Martini nwee naanị gram 7 shuga kwa iko. Ihe kacha masị anyị bụ nhọrọ mmanya: Kama vodka ọdịnala, mmanya mmanya mmanya Loverboy gbanwere.
Mmanya oroma na-emepụta vodka-dị ka isi [nke] na-enye anyị ohere ibuga spritzes anyị na martinis onye na-azụ ahịa, ka Cooke na-akọwa. [A na-eme ya] site na peels oroma nke gafere usoro nhazi na ọgwụgwọ ikike ịnweta profaịlụ na-anọpụ iche, dịka vodka. Na nke ahụ kwuru, ọ dịghị ihe dị ka mmanya (ma ọ bụ oroma maka ya). N'ezie, enweghị uto ọ bụla ma ọlị, mana ọ na-enye mmanya dị mma, nke dị elu n'ọnọdụ mmụọ.
N'agbanyeghi onu ogugu ya na ihe ndi ozo di iche iche, ihe onunu na ato uto dika mmanya. Ga-achọpụta na-esi ísì ụtọ kọfị oge ị gbawara nwere ike; okpukpo nwere uto di iche na ya. Ọ bụ ezie na ihe ọ drinkụ drinkụ ahụ nwere obere pasent 12 nke ABV, a naghị agbagha agbagha ya. Afọ ude ya na-adọrọ mmasị anyị, karịsịa ebe ọ bụ na enweghị mmiri ara ehi. Ọ bụ ezie na ọ dịghị ka espresso martini (ọ bụrụ na ị bụ ihe niile gbasara ekpomeekpo ma ọ bụ ikpo ọkụ nke vodka dị elu na ezigbo espresso, ị nwere ike ịhapụ ya na ihe nnọchi a), ụtọ ya, booziness na kọfị kọfị bụ ezigbo ndị ọkachamara. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-a aụ ara maka nke mbụ, ihe ọzọ a na-atọ ụtọ nwere ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke shuga na obere nke calorie, yabụ na ọ bara uru ịgbanye onye ọ bụla jụrụ ịhapụ nri ahụike-ish ya mebiri oge obi ụtọ.
echiche banyere inyere ndị ọzọ aka
Dị ka ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ nke Loverboy, espresso martini kachasị mma jijiji ma mee ka ọ dị jụụ. You nwere ike ijere ya ozi n’elu ice n’ime otu iko ma ọ bụ ghaa n’ibe niile site n’ikwe ya na akpụrụ mmiri na mmanya — nke a ga-enye ihe ọ theụ theụ ahụ isi ọfụfụ mgbe akpịrị na iko martini. N'ezie, ị nwere ike ịmịpụ ya mgbe niile site na can mgbe ị nọ n'ọnọdụ ahụ-nke ahụ bụ mma nke mmanya mmanya nke anaghị achọ ihe ọ bụla ma ọ bụ iko, ka emechara.
afọ abụba omume n'ụlọ
Loverboy Martini dị naanị na ntanetị na steeti 44 na ngwugwu asatọ dị ọnụahịa na $ 49 ọ bụla. O nwere ike iyi ihe dị oke ọnụ na mbụ, mana nke ahụ na-apụta ihe ruru ego isii kwa mmanya, nke dị ọnụ ala karịa ịnye espresso martini site na ụlọ mmanya kachasị amasị gị.
Morningtụtụ gị mmiri ara enwere anyaụfụ ugbua.
Zụta ya ($ 49 / asatọ)
PureWow100 bụ ọnụ ọgụgụ ndị editọ anyị na-eji enyocha ngwaahịa na ọrụ ọhụụ, yabụ na ị maara ihe ọnụ ahịa ya ga-efu-na ngụkọta ngụkọta. Mụtakwuo banyere usoro anyị Ebe a.
Njikọ: OLIPOP Bụ Ahụike Dị Mma Maka Soda ’ve Na-achọ
Categories Onye India Rentzụ Ụmụ Ga-Ahụ
ụdị tomato na aha
usoro ọgwụgwọ iji wepụ ntutu ihu
Ofdị ofe dị iche iche iri
hairdị ntutu isi maka ụmụ agbọghọ
Ndụmọdụ mara mma dị mfe maka na-enwu gbaa
banana nwere protein